Galaxy Note5တွင် 4K မျက်နှာပြင်နှင့်ကွေးသောမျက်နှာပြင်ပါရှိသည်
လာမည့်တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီဖြစ်သော Galaxy Note5တွင် 4K resolution ရှိသည့်မျက်နှာပြင်နှင့်ကွေးညွှတ်ထားသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုရှိနိုင်သည်။
Kingszone Z1 ကို ၆၄-bit OctaCore ကိုဒေါ်လာ ၁၇၉.၉၉ ဖြင့်သာပြန်လည်စစ်ဆေးပါ
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် Kingszone Z1 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ 64-bit octa core တစ်ခုနှင့် GB RAM နှစ်ခုကိုဒေါ်လာ ၁၇၉.၉၉ ဖြင့်သာပေးမည်။
Dell Venue 10 7000, Dell ၏ပရီမီယံတက်ဘလက်အသစ်
Dell Venue 10 7000 သည် Dell ၏တက်ဘလက်အသစ်ဖြစ်ပြီး iPad Air2သို့မဟုတ် Microsoft Surface3ကဲ့သို့အဆင့်မြင့်တက်ဘလက်များနှင့်တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။
LG G4 ၏အရည်အသွေးမြင့်ကင်မရာများ - 16MP နောက်ဘက်တွင်f/ 1.8 aperture နှင့် 8MP ရှေ့မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်
LG သည်4ပြီလ ၂၈ ရက်တွင်ပြသမည့်၎င်း၏ G28 အသစ်၏သီလများကိုတဖြည်းဖြည်းဖော်ပြသည်။ ဤအချိန်တွင်ကင်မရာများအတွက်အချိန်ဖြစ်သည်
LG ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ - G4 ကိုအသုံးပြုသူ ၄၀၀၀ ဖြင့်စမ်းသပ်လိမ့်မည်
စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာအသစ်များကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေကြသည်။ ယခု LG သည် 4000G အထိ LG G4 ကိုအသုံးပြုသူများကိုထောက်ပံ့ပေးနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
Android Wear သည်မတူညီသောထုတ်လုပ်သူများမှကြိုးအသစ်များကိုလက်ခံရရှိသည်
Google က Android Wear တွင်၎င်းတို့၏စမတ်နာရီများအတွက်မတူညီသောကြိုးများကိုထောက်ပံ့ပေးမည့်မိတ်ဖက်အသစ်များရှိလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
LG G Pad 10.1 ကို ၁၀ လက်မတက်ဘလက်တစ်လုံးနှင့်ယူရို ၂၀၀ ထက်မပိုသောသုံးသပ်ချက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ယနေ့တွင်သင့်အား ၁၀ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် HD resolution ပါဝင်သည့် LG G Pad 10.1 ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်ကိုယူဆောင်လာပြီးယူရို ၁၈၉ သာရနိုင်သည်။
Moto G 4G ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ Moto G 4G ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းယူဆောင်လာပါမည်။ ထို့ကြောင့် LTE ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူဤ Moto G 2014 ဗားရှင်းအသစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုမြင်တွေ့နိုင်စေရန်သင်ဆောင်ကျဉ်းပေးပါမည်။
HTC One M9 Plus ကို ၅.၂ လက်မ QuadHD မျက်နှာပြင်၊ Duo Camera နှင့် fingerprint sensor တို့ဖြင့်ကြေငြာခဲ့သည်
HTC One M9 Plus အသစ်သည် One M9 ထက်ဖုန်းပိုကြီးပြီးအထူးအင်္ဂါရပ်တစ်ခုအဖြစ်လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာရှိသည်။
LG သည် G4000 ကိုစတင်မိတ်ဆက်မည့်အချိန်၌စမ်းသပ်ရန်အသုံးပြုသူ ၄၀၀၀ ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်
LG သည် G4000 ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ကိုနိုင်ငံပေါင်း ၁၅ နိုင်ငံမှစမ်းသပ်ရန်အသုံးပြုသူ ၄၀၀၀ ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်
HTC One M10 သည်ဤသို့ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က HTC One M9 ၏တရားဝင်ဖြန့်ချိခြင်းမှကွန်ယက်ပေါ်တွင် HTC One M10 ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကွဲပြားခြားနားသောအယူအဆများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ပြီးဖြစ်သည်။
iFixit သည် Samsung Galaxy S6 Edge ကိုဖြုတ်သည်
iFixit သည်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုပြန်လည်ဖြိုခွဲခြင်း Galaxy S6 Edge ကိုဖြုတ်ခဲ့သည်။ ဤကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရပြုပြင်ရန်ခက်ခဲသော terminal တစ်လုံး။
Huawei သည် P8 ကို၎င်း၏အဓိကစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်လိုက်သည်
Aprilပြီလ ၁၅ ရက်တွင် Hu15i ၏ပြက္ခဒိန်တွင် P8 ကိုပြသမည့်နေ့သည်၎င်း၏အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ဖြစ်သည်။
LG မှတရားဝင် G4 Video Teaser ကိုထုတ်လုပ်လိုက်သည်
၂၀၁၅ အတွက်ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူအသစ်ဖြစ်သည့် LG G4 ၏တရားဝင်ကြော်ငြာတိုဗီဒီယိုကိုရရှိပြီးဖြစ်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဓာတ်ပုံနှင့်အတူရောက်လာလိမ့်မည်။
ZTE Blade S6 Plus ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရနိုင်သည်
အသစ် ZTE Blade s6 Plus ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ ကုမ္ပဏီသည် Ebay ကိုအရောင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်
ဒုတိယမျိုးဆက် Moto 360 ၏ပထမဆုံးပုံကိုစစ်ထုတ်သည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကမျိုးဆက်သစ် Motorola ၏စမတ်နာရီ - Moto 360 ကိုပထမဆုံးမြင်တွေ့ရပြီးနောက်ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမဆုံးပုံရိပ်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့သည်။
များစွာသောသိပ္ပံပညာစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်များတွင်သင်သည်၎င်းကိုတွေ့မြင်ပြီးပြီဖြစ်သည်။ Samsung ကအနာဂတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများသည် touch အစိတ်အပိုင်းကိုအသုံးမပြုဘဲကျွန်ုပ်တို့၏အကြည့်ကိုအသုံးပြုသည်။
LG က UX 4.0 ကို LG G4 မတိုင်မီသင်ကြားပေးမည်
LG G4 သည် UX 4.0 ပါ ၀ င်သောကိုယ်ပိုင်အသားအရေဖြင့်လာမည်။ အမြင်အာရုံကိုတိုးတက်စေမည်မဟုတ်သော်လည်းလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအသစ်များရှိလိမ့်မည်
Sony Xperia Z4 ၏ပုံရိပ်အသစ်များကိုစစ်ထုတ်သည်
Sony ၏နောက်ထပ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Xperia z4 ပေါက်ကြားမှုအသစ်သည်ထုတ်ကုန်၏နောက်ဆုံးအသွင်အပြင်ကိုပြသခဲ့သည်။
Lenovo A7600-M သည်ဈေးနှုန်းချိုသာသော phablet တစ်ခုဖြစ်သည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီ Lenovo A7600-M မှ Phablet အသစ်တစ်လုံးပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ကြီးစွာသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်တတ်နိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အတူတစ် ဦး က terminal ကို။
OnePlus One ၏ကိုယ်ပိုင် ROM, OxygenOS, ယခုရရှိနိုင်ပြီ
OxygenOS, OnePlus တီထွင်ပြီးသင့် OnePlus One စက်ပစ္စည်းအတွက်သီးသန့်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ ROM, ယခုဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သည်။
Galaxy S6 ဟာ Samsung ထက်ပိုပြီးများတယ်
Samsung Galaxy S6 ၏အတွင်းပိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ Samsung မှပြုလုပ်သောအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည်။
Huawei ၏အဆိုအရစမတ်နာရီကိုဝယ်ရန်အကြောင်းပြချက် ၁၂ ချက်ရှိသည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ဘလော့ဂ်တွင် Huawei စမတ်နာရီကိုဝယ်ရန်အကြောင်းပြချက် ၁၂ ခုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Meizu သည် ၂၀၁၅ ပထမသုံးလပတ်အတွင်းရောင်းချခဲ့သောစမတ်ဖုန်း ၂ သန်းရှိသည်
အာရှကုမ္ပဏီသည်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အရောင်းအ ၀ ယ်ဆက်လက်တိုးပွားနေသဖြင့် Meizu သည်စတုတ္ထသုံးလပတ်အတွင်းစမတ်ဖုန်း ၂ သန်းကျော်ရောင်းချခဲ့ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
လာမည့် Moto 360 ၏ပထမဆုံးသင်္ကေတများပေါ်လာမည်
နောက်မျိုးဆက် Moto 360 သည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီနှင့်နီးစပ်သောအချို့ပေါက်ကြားချက်များအရသတင်းအချက်အလက်များကိုမကြာမီလူသိများလာလိမ့်မည်။
Huawei P8 ၏ပြန်ဆိုမှုများသည်၎င်းကိုမတင်ပြမီစစ်ထုတ်သည်
လာမည့်ရက်များ၌တရုတ်ကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏နောက်ထပ်စမတ်ဖုန်းကိုတင်ဆက်ပြသမည်ဖြစ်သော်လည်းယင်းမတိုင်မီက Huawei P8 ၏အချို့သောပြန်ဆိုချက်များကိုတွေ့နိုင်သည်။
Huawei P8 Lite ၏ကြော်ငြာပုံများထွက်လာသည်
အာရှကုမ္ပဏီသည် Huawei P15 Lite ပွဲကိုAprilပြီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်မည့်ပွဲစဉ်တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။
Galaxy S6 Edge ၏နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုတစ်ခု
Galaxy S6 Edge ၏နောက်ထပ်ကျဆင်းမှုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအရ terminal သည်ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်းပြိုကွဲခြင်းအန္တရာယ်ရှိသည်။
HTC သည် Desire အကွာအဝေးကို HTC Desire 526G နှင့် HTC Desire 626G ဖြင့်ဆက်လက်ချဲ့ထွင်သည်
ထိုင်ဝမ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူသည် HTC Desire 526G နှင့် HTC Desire 626G တို့နှင့်အတူမော်ဒယ်လ်ပစ္စည်းများကိုဆက်လက်ချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။
Samsung Galaxy S7 ကိုစတင်အလုပ်လုပ်နေပြီလား ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် display ထုတ်လုပ်မှုကိုတစ်လလျှင်ယူနစ် 8 သန်းတိုးမြှင့်
အမည်မဖော်လိုသော Samsung သတင်းရင်းမြစ်များ၏အဆိုအရထုတ်လုပ်သူသည် Samsung Galaxy S8 အတွက်တစ်လလျှင် ၈ သန်းအထိပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် OLED ဖန်သားပြင်များထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
Vodafone Samsung Galaxy Note4အတွက် Android Lollipop အတွက်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော update ကိုဤနေရာတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်
HTC One E9 ကို HTC One M8 နှင့်၎င်း၏ယခင် E8 နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဒီနှစ်အတွက်ထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူရဲ့နောက်ထပ်အဆင့်မြင့်တစ်ခု
LG G4 Case သည်ဖုန်း၏ rendering ကိုပြသည်
အမှုတစ်ခုသည် LG G4 နှင့်၎င်း၏ကွေးသောပုံသဏ္showsာန်ကိုကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူ၏ကွဲပြားခြားနားသောအလယ်အလတ်တန်းစားကိရိယာများနှင့်ပြသထားသည်
Samsung Galaxy S6 နှင့် S6 Edge တို့သည် S5 နှင့်နှိုင်းယှဉ်။ ထားသည့်သိုလှောင်ထားသည့်ပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးနိုင်သည်
ကောလာဟလအသစ်များအရအမေရိကန်ရှိ Samsung Galaxy S6 နှင့် Samsung Galaxy S6 Edge တို့၏ယမကာများသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Galaxy S5 ထက်နှစ်ဆပိုများသည်။
Xiaomi Mi Note ပန်းရောင်အမျိုးသမီးပရိသတ်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်
Xiaomi Mi Note ပန်းရောင်သည်အမျိုးသမီးစျေးကွက်အတွက်သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားသောတရုတ်ကုမ္ပဏီမှ ၅ လက်မအမြင့်ရှိ terminal အသစ်ဖြစ်သည်။
Sony တွင် Xperia Z ၏ Android5L update ကိုကြေငြာခဲ့သည်
Sony Xperia Z သည် Google + အကောင့်မှတစ်ဆင့် Android 5.0 ကိုမကြာမီ update ပြုလုပ်တော့မည်ဖြစ်သည်
OnePlus One ကိုဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ
သင် OnePlus One ကိုဝယ်ချင်ပါသလား။ ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲမသိဘူးလား။ ဤအရာသည်အလွန်အောင်မြင်သောဤ terminal ကိုသင်မည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်းသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပြီးပြောပြပါမည်။
Xiaomi ၏အမည်မဲ့€ 80 ဖုန်းသည် Redmi 2A ဖြစ်သည်
Xiaomi ၏ Redmi 2A သည်lowပြီလ ၈ ရက်နေ့တွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောဖုန်းသစ်ဖြစ်သည်။ Motorola နှင့်အခြားသူများအတွက်ခက်ခဲစေရန်အတွက်ဖုန်း
တရားဝင်မိတ်ဆက် HTC One E9 +
HTC သည် HTC One M9၊ HTC One M9 ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောမျက်နှာပြင်နှင့်အာရှစျေးကွက်အတွက်ပလတ်စတစ်အချောဖြင့်တရားဝင်တင်ဆက်သည်
Sony Xperia Z4 စံနှုန်းများကိုပေါက်ကြားစေခဲ့သည်
Xperia Z4 ၏စံသတ်မှတ်ချက်များသည် Sony ၏အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်၏နည်းပညာဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
Galaxy S6 Edge သည်ရေကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်၊ ၎င်းကိုဗီဒီယိုဖြင့်ပြသသည်
Galaxy S6 Edge သည်ရေစိုခံနိုင်ပြီး၎င်းကို Drop Test ဗီဒီယိုဖြင့်ပြသသည်။
ZTE ၏အဆိုအရ Nubia Z9 မကြာမီရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်သည်
ZTE ကဒီစီးရီးရဲ့တတိယမြောက် Nubia Z9 ဟာမကြာခင်မှာပဲစျေးဝယ်စင်တာတွေပြသမှာဖြစ်ပါတယ်
လာမည့် Jiayu S4 terminal ၏ဒီဇိုင်း၏ပုံရိပ်များစွာနှင့်၎င်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအပြင်ပေါက်ကြားသွားသည်။
စပိန်နိုင်ငံရှိ HTC One M9 ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဘယ်လို ၀ ယ်ရမယ်ဆိုတာကိုမင်းတို့ပြသနေပါတယ်။ အမေဇုံကသင့်ကိုယူရို ၇၄၉ နဲ့သိမ်းဆည်းထားနိုင်တယ်။
အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Motorola ကယခုအချိန်တွင်၎င်းတို့သည်တက်ဘလက်များထုတ်လုပ်ရန်စိတ်မ ၀ င်စားကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
Samsung Galaxy S6 Edge သည်သင်မြင်တွေ့ရသမျှတွင်အခံပြင်းဆုံးခံနိုင်ရည်ရှိမှုကိုစမ်းသပ်သည်
Samsung Galaxy S6 Edge သည်ယင်းတို့အားလုံးကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်ကိုပြသသောစွဲမှတ်ဖွယ်ခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှု။ စုန်းအတတ်ဒါမှမဟုတ် S6 Edge က Nokia 3310 အသစ်လား။
သူတို့၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပရိုဖိုင်းတွင်ကြော်ငြာတွင်သူတို့ HTC One M8 အကြောင်းပြောဆိုရန် HTC One M9 ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် HTC မအောင်မြင်ပါတကား
အသစ်ပေါက်ကြားနေသောပုံများက HTC One M9 Plus တည်ရှိကြောင်းနှင့်အနှေးနှင့်အမြန်ဆိုလျှင်စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိတော့မည်ကိုပြသသည်
LG G2 Flex သည်စမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခဲ့သည်
တောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးထုတ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်သော LG G2 Flex သည်စမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မဟုတ်ပါ၊ HTC One M9 သည်အပူလွန်ကဲခြင်းမရှိတော့ပါ။ ဒီပုံကသက်သေပြ
အသစ်ပုံရိပ်တစ်ခုအရ HTC One M9 သည်အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်အပူလွန်ကဲသည့်ပြfromနာနှင့်ကြုံတွေ့ရတော့သည်မဟုတ်ပါ
ZTE Nubia Z9 Max ၏အခြေခံစံနှုန်းတစ်ခုသည်၎င်း၏အလားအလာကိုပြသသည်
အာရှကုမ္ပဏီဖြစ်သော Nubia Z9 Max မှ terminal အသစ်ကကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော terminal တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အလွန်အင်အားကြီးမားကြောင်းပြသသည်။
Olio သည်ထူးခြားသောဒေါ်လာ ၆၀၀ စမတ်နာရီဖြစ်သည်
၂၀၁၅ သည်စမတ်နာရီများထွက်ပေါ်လာသည့်နှစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Olio's၊ စွယ်စုံသုံးပြီးစျေးကြီးသည့်နာရီကဲ့သို့သူတို့၏ထုတ်လုပ်ရန်စိတ် ၀ င်စားသောထုတ်လုပ်သူများစွာရှိပြီးဖြစ်သည်။
မေလမှာ HTC T1H တက်ဘလက်ကိုAprilပြီ ၈ ရက်မှာပြသမယ့်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုနဲ့စတင်ဖို့ရွေးချယ်ထားပုံရတယ်
LG G4 ကိုလာမယ့်လတွေမှာလာမယ်၊ ကိုရီးယားကုမ္ပဏီရဲ့ဖုန်းပုံရိပ်တွေအများကြီးရှိတယ်
ဒီ Meizu ရဲ့ Android 5.0 ကိုစက်ပစ္စည်းများမွမ်းမံရန်အတွက်လမ်းပြမြေပုံလား။
အဓိက Meizu ဆိပ်ကမ်းများကို Android 5.0 သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည့်နေ့ရက်များကိုပြသည့်လမ်းပြမြေပုံပေါက်ကြားခဲ့သည်
Benchmarks အရ Galaxy S6 Edge ဘက်ထရီသည်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်
၂၆၀၀ mAh သာရှိသည့် Galaxy S6 Edge ၏ဘက်ထရီသည် terminal မှစမ်းသပ်မှုများအရရလဒ်ကောင်းများရရှိသည်။
နောက် Moto X 2015 ကိုသြဂုတ်လတွင်ထွက်ရှိနိုင်မည်
Motorola ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Motorola ထုတ်ကုန်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်မယ်လို့ကြေငြာခဲ့ပြီး Moto X 2015 ကိုသြဂုတ်လမှာထွက်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်။
ZTE Nubia Z9 Max နှင့် Nubia Z9 mini တို့ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
ZTE သည်ယခုအကြိမ် ZTE Nubia Z9 Max နှင့် Z9 Mini နှင့်အတူဗားရှင်းနှစ်မျိုးထပ်မံပေါ်လာသည်။ ဒီတရုတ်ထုတ်လုပ်သူထံမှစိတ်ဝင်စားဖို့ဖုန်းနှစ်လုံး
Samsung နှင့်ပတ်သက်သောအငြင်းပွားဖွယ်ရာနှင့်သတ္တုအမှုကိစ္စများအားငြင်းဆိုခြင်းအားဖြေရှင်းပြီးပါက LG G4 ၏ကြေငြာချက်ဖြင့်ပြန်လည်ရှင်သန်လာပြီ။
ပုံအသစ်များက Meizu MX Supreme ၏အိမ်ခလုတ်ကိုပြသသည်
Meizu MX Supreme ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်ခလုတ်နှင့်ဖုန်း၏အောက်ခြေရှိဓါတ်ပုံများသည် Weibo တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖန်သားပြင်ရှိစမတ်ဖုန်းများရှိလာနိုင်ကြောင်း Samsung ကအတည်ပြုခဲ့သည်
ကိုရီးယား Bussiness သတင်းစာနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတစ်ခုတွင် Samsung က၎င်းသည် 2016 ခုနှစ်တွင်ခေါက်ဖုန်းမျက်နှာပြင်ဖုန်းများထုတ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်
HTC One M9 Plus ၏ပထမဆုံးအစစ်အမှန်ရုပ်ပုံများကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်
ကိရိယာ၏လှောင်ပြောင်မှုကိုပြသသည့်ဗီဒီယိုအပြင် HTC One M9 Plus ၏ပထမဆုံးအစစ်အမှန်ရုပ်ပုံများကိုစစ်ထုတ်သည်။
LG G4 သည်ဤပြန်ဆိုချက်များနှင့်တူသလား။
လာမည့် LG flagship LG G4 ၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့စောင့်နေစဉ်တောင်ကိုရီးယား terminal သည်မည်သို့မည်ပုံပြန်ဆိုမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချန်ထားပါသည်။
Xiaomi သည်စမတ်နာရီနှင့်ဖုန်းအသစ်စတင်ခြင်းနှင့်အတူ၎င်း၏ ၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုကျင်းပမည်ဖြစ်သည်
Xiaomi သည်မတ်လ ၃၁ ရက်တွင် ၅ နှစ်ပြည့်ပြီးသူကဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် Mi Watch စမတ်နာရီနှင့်အလယ်အလတ်တန်းစားဖုန်းအသစ်တစ်မျိုးကိုထုတ်လုပ်မည်။
Xiaomi Ferrari သည်လက်ရှိ Redmi2၏ဆက်ခံသူဖြစ်နိုင်သည်
Xiaomi Ferrari သည်လက်ရှိ Redmi2ကိုဆက်ခံနိုင်သည်။ terminal တွင် ၄.၉ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် 4,9-bit Snapdragon 615 တို့ပါဝင်သည်။
Samsung Galaxy S6 ကိုဘယ်လိုဖြုတ်ရမလဲ
ဤဗွီဒီယိုတွင် Samsung Galaxy S6 ကိုဖြုတ်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြသည်။ ၎င်းကိုအသုံးပြုမှုသည်တံဆိပ်ခတ်ခြင်းကြောင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။
Cyanogen Inc သည်ယခုနှစ်တွင် Google အက်ပလီကေးရှင်းမပါဘဲဖုန်းကိုစတင်မိတ်ဆက်မည်
ဂူဂဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းများမပါရှိဘဲ၎င်းသည်အလယ်အလတ်တန်းစားအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ Blu နှင့်အတူမဟာမိတ်ပြုသည့် Cyanogen ၏ဖုန်းအသစ်ဖြစ်လိမ့်မည်
Lenovo K3 Note ကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်
တရုတ်ကုမ္ပဏီသည်နောက်ထပ် terminal တစ်ခုဖြစ်သည့် Lenovo K3 Note ကိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ချက်များပါ ၀ င်သည့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်တင်ပို့နိုင်သည်။
Xiaomi သည် ၄၀ လက်မအရွယ် Mi TV 40 ဗားရှင်းဖြစ်သော Android TV ကိုဒေါ်လာ ၃၂၀ ဖြင့်ပေးသည်
Android2KitKat၊ ၄၀ လက်မနှင့်ဒေါ်လာ ၃၂၀ ဖြင့် Sharp panel သုံးသောကျွန်ုပ်၏ TV 4.4 သည်၎င်း၏တန်ဖိုးအတွက်စဉ်းစားရန်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ဆမ်ဆောင်းသည်သင်၏ Office ပေါ်တွင် Microsoft Office အက်ပလီကေးရှင်းများကိုကြိုတင်တပ်ဆင်မည်
Samsung ကသူ့ရဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအက်ပလီကေးရှင်းကိုဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များသို့ယူဆောင်လာရန် Microsoft နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်
ဥရောပရှိစမတ်ဖုန်းစျေးနှုန်းများ ၀ ယ်ယူရန်စျေးနှုန်းချိုသာသောနေရာသည်အဘယ်မှာရှိသနည်း။
Samsung Galaxy S6 ကိုအိန္ဒိယတွင်စတင်ထုတ်လုပ်သည်
ဥရောပရှိဆိပ်ကမ်းများဖြန့်ဝေနိုင်ရန်အတွက် Samsung Galaxy S6 နှင့် Samsung Galaxy S6 Edge တို့ကိုအိန္ဒိယရှိ Samsung စက်ရုံတွင်ထုတ်လုပ်မည်။
iOS ၏တရား ၀ င်မဟုတ်သော Android Wear နှင့်အခြားဗီဒီယိုတစ်ခုတွင်တွေ့နိုင်သည်
iOS ၏တရား ၀ င်မဟုတ်သော Android Wear နှင့်အခြားဗီဒီယိုတစ်ခုထွက်ပေါ်လာသည်။
HTC One M9 ကိုယခုထိုင်ဝမ်တွင်ရနိုင်သည်
ယခု HTC ရှိယောက်ျားများသည် software update မှတဆင့်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပြီးပြီ ဖြစ်၍ သူတို့သည် HTC One M9 ကိုထိုင် ၀ မ်တွင်အလွန်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်စပိန်သို့ယူရို ၇၄၉ ထက်နည်းလိမ့်မည်ဟုမမျှော်လင့်ပါ။
Meizu နှင့် Nokia သည် Meizu Supreme ကိုစက်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေလိမ့်မည်
ဖင်လန်ကုမ္ပဏီ Nokia နှင့်တရုတ်ကုမ္ပဏီ Meizu သည် Meizu Supreme ဟုခေါ်သောကိရိယာပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေပုံရသည်။
HTC One M9 အတွက်ဆော့ဖ်ဝဲ OTA သည်၎င်း၏အပူချိန်ကို ၁၅ ဒီဂရီလျော့နည်းစေသည်
XDA အသုံးပြုသူတစ် ဦး ကသူ၏ HTC One M9 သည် terminal ၏အပူချိန်ကို ၁၅ ဒီဂရီလျော့နည်းစေသည့် software update ကိုလက်ခံရရှိကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
Huawei Ascend P8 ပုံရိပ်အသစ်များ
Huawei Ascend P8 ၏ပုံရိပ်သစ်သည် terminal schematic နှင့် P8 အသစ်၏အရွယ်အစားအတိအကျကိုပြသထားသည်။
HTC One M7 သည် Android 5.1 ကိုလက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ အပြစ်တင်တာလား အမှားအယွင်းများနှင့်အမှားအယွင်းများကိုပြုပြင်ရန်ဂူဂဲလ်နှင့်၎င်း၏မွမ်းမံမှုများမှ
Moto 360 သည်အိတ်ဆောင်နာရီတစ်လုံးဖြစ်သင့်သည်
Moto 360 သည်၎င်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ခဲ့ပြီး၎င်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်အဖုံးကတစ်သက်တာ၏ပုံမှန်လက်ပတ်နာရီကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုသတိရစေသည်။ ၎င်းကိုအိတ်ဆောင်နာရီအဖြစ်အသုံးပြုသူများလည်းရှိသည်။
Android Lollipop ပေါ်မှာ LG G3 ကို root လုပ်နည်း
Android Lollipop တွင် Root LG G3 ရရန်ရိုးရှင်းသောလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာ။
[ROM] Cookie Rom ကိုသုံးပြီး LG G2 ကို Android Lollipop တရားဝင်စတော့အိတ်သို့မွမ်းမံနည်း
ဒီနေ့ LG G2 ကို Android Lollipop Official Stock သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပို့ပေးပါပြီ။ Android 5.0.1 LG Lollipop ကိုအခြေခံထားတဲ့ချက်ပြုတ်ထားသော Rom မှလွဲ၍ တခြားနည်းလမ်းမရှိပါ။
ဖခင်များနေ့အတွက်ဘာပေးရမယ်ဆိုတာမသိသေးဘူးလား ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့သင်ပေးမည့်အကောင်းဆုံး Gadgets ၅ ခုယူဆောင်လာသည်။
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည် Windows 10 ကို Android ဖုန်းများသို့ယူဆောင်လာရန်စီစဉ်ထားပြီး၎င်းအနက်တစ်ခုမှာ Xiaomi Mi4 ဖြစ်သည်
Xiaomi Mi4 သည် Windows 10 ကို Cyanogen's ကဲ့သို့ကိုယ်ပိုင် ROM ကဲ့သို့စမ်းသပ်ခဲ့သည့်ပထမဆုံးဖုန်းဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy S6 Edge နှင့် iPhone6Plus နှင့်ဓာတ်ပုံများကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း
Samsung Galaxy S6 ကင်မရာနှင့်ရိုက်ကူးထားသောအချို့ဖမ်းယူမှုများကို iPhone6Plus ကင်မရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း
သူတို့က Samsung Galaxy S6 နဲ့ S6 Edge ကို root လုပ်ပြီးပြီ
Chainfire အဖွဲ့က၎င်း၏ CF Auto-Root application ကို အသုံးပြု၍ Samsung Galaxy S6 နှင့် S6 Edge ကိုအမြစ်တွယ်နိုင်ပြီဟုကြေငြာခဲ့သည်။
Sony Xperia Z4 ကိုစက်တင်ဘာလတွင်ပြသနိုင်သည်
ကောလဟာလအသစ်များအရ Sony သည်ဘာလင်ရှိ IFA တွင်စက်တင်ဘာလတွင် Sony Xperia Z4 ကိုတင်ဆက်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်
[APK] မည်သည့် Android terminal တွင်မဆို Motorola ပြခန်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ
Motorola gallery application ကို Android terminal မှာဘယ်လို install လုပ်ရမလဲ၊ root မလိုပဲရှင်းပြပါမယ်။
Samsung Galaxy Tab A နှင့် Tab A Plus တို့ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Samsung က ၈ လက်မအရွယ် Galaxy Tab A နှင့် ၉.၇ လက်မ Tab A Plus မှတက်ဘလက်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးကိုရုရှားတွင်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်စေသည်။
HTC One M9 သည်ပရိုဆက်ဆာမဟုတ်ဘဲ၎င်း၏ဆော့ဝဲလ်မှအပူလွန်ကဲနေသည်
HTC One M9 ၏အကြီးတန်း HTC မန်နေဂျာကမူ HTC One MXNUMX အပူလွန်ကဲမှုပြသနာများသည်ကိရိယာ၏ဆော့ဖ်ဝဲကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ကောလဟာလများပြန်သွားသည်။ Nokia နှင့် Meizu တို့သည်ကြီးမားသောအရာတစ်ခုကိုအတူတကွပြင်ဆင်နေကြသည်
Meizu နှင့် Nokia သည် Meizu MX4 Supreme ကိုစက်ပစ္စည်းအသစ်တွင်အတူတကွလက်တွဲလုပ်ကိုင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောကောလဟာလများထွက်ပေါ်လာသည်။
Samsung Orbis, လာမည့် Galaxy Gear သည်ကင်မရာဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည်
Samsung Orbis သည် Samsung ၏အလောင်းအစားဖြစ်သည်။ တောင်ကိုရီးယားသည်အရာဝတ္ထုများကိုမှတ်မိနိုင်သည့်ကင်မရာဖြင့်နာရီဝက်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
HTC One M9 သည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်များစွာအပူရှိန်ရှိသည်
HTC One M9 အတွက်သတင်းဆိုးများလာခြင်းနှင့်အချို့သောစမ်းသပ်မှုများအရ၊ terminal သည်အခြားသောအကွာအဝေးတူအခြားကိရိယာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်များပြားသည်။
Sony သည် Xperia Z5.0 နှင့် Z3 Compact သို့ Android3Lollipop ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
နောက်ဆုံး၌ Sony သည် Android 5.0 Lollipop ကို Xperia Z3 နှင့် Xperia Z3 Compact ဗားရှင်း ၅.၀ တွင်ယူဆောင်လာခဲ့သည်။
တရုတ်ကုမ္ပဏီ Xiaomi သည်အခြားအင်္ဂါရပ်များအကြားကြီးမားသောအချင်းရှိပြီး NFC နည်းပညာဖြင့်ပတ်ပတ်လည်ပါးလွှာသောသတ္တုစမတ်နာရီတစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်သည်။
Moto E 2015 သည် Androidsis နှင့် Motorola Spain တို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
Motorola Moto E 4G အသစ်ကိုသင်အနိုင်ရလိုပါသလား။ အကယ်၍ အဖြေရှိပါက Androidsis နှင့် Motorola Spain တို့ကသင့်အားအခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးသည့် Moto E 2015 Giveaway တွင်ပါဝင်ပါ။
Huawei P13 ၏ 8MP ကင်မရာရိုက်ယူထားသောဓာတ်ပုံကိုစစ်ထုတ်သည်
အလင်းရောင်နည်းသောအခြေအနေများတွင် P8 ကင်မရာသည်အရည်အသွေးကိုပြသရန် Huawei အားဓာတ်ပုံတစ်ပုံကကူညီသည်
Huawei သည် G7 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Ascend Mate7Mini ပေါက်ကြားမှု
Huawei Ascend Mate7mini ကိုရှေ့ပြေးပုံစံ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့မသွားမီ G7 ၏ဘေးတွင်တွေ့ရသည်။
[Infographic] ကျွန်ုပ်တို့သည် Samsung Galaxy S ၏သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်
Samsung Galaxy S သည်အရောင်းရဆုံးဖြစ်သည်။ စမတ်ဖုန်း ၃ လုံးလျှင် ၁ ခုသည်၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သည်။ သူတို့သမိုင်းကြောင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့် infographic ကြောင့်ဖြစ်သည်။
Wiko Higway Pure ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပါးဆုံးသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Wiko Higway Pure ကိုပထမဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Android 5.1.1 ကို Nexus5တော်တော်များများတွင်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်
ထူးခြားသည်မှာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း Mountain View မှသူများသည်ယခုအသစ်ပေါ်လာသည့်အထူးသဖြင့် Android 5.1.1 ကို Android version အသစ်ကြေငြာခဲ့သည်
Meizu M1 Note ကိုစပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာပြီးယူရို ၂၀၀ ထက်မကသက်သာနိုင်သည်
ငွေကြေးတန်ဖိုးအရအကောင်းဆုံးဆိပ်ကမ်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Meizu M1 Note သည်စျေးကွက်သို့ယူရို ၂၀၀ အောက်လျော့နည်းသွားလိမ့်မည်
Oppo R7 သည်တရုတ်ထုတ်ကုန်အသစ်၏အဓိကစွမ်းဆောင်နိုင်မှုဖြစ်သည်
Oppo R7 သည်တရုတ်နိုင်ငံ၏ထုတ်လုပ်မှု၏အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်ဖြစ်လာပြီး ၄.၈၅ မီလီမီတာသာရှိသောကမ္ဘာ့အပါးလွှာဆုံးမိုဘိုင်းဖုန်းဖြစ်လာလိမ့်မည်။
Micromax သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် Android TV 4K ရုပ်မြင်သံကြားကိုဒေါ်လာ ၆၄၀ ခန့်ဖြင့်ရောင်းချသည်
ခန့်မှန်းခြေဒေါ်လာ ၆၄၀ ဖြင့် Micromax သည် ၄ ​​င်း၏ 640K ရုပ်မြင်သံကြားကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ Android TV ဖြင့်တင်ဆက်သည်။ ထပ်မံထည့်သွင်းမည့် Android TV ဖြင့်လောင်းကစားအသစ်
Android 5.1 Lollipop အသစ် update သည် Nexus range of Motorola Nexus6၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။
LG မှထုတ်လုပ်သည့် LG သည် ၆ လက်မအရွယ်ရှိ Phablet ကို Samsung Note range နှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အဆင်သင့်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
အမျိုးမျိုးသော Nexus ထုတ်ကုန်များအတွက် Android 5.1 OTAs
Android 5.1 OTAs များသည် Nexus ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးအတွက်ရရှိနိုင်ပါပြီ။ သင်၏ terminal တွင်သတင်းများရှိလိုပါက၎င်းကိုထည့်သွင်းပါ
LG G Watch R ကို Apple Watch နှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်
LG G watch R နှင့် Apple Watch တို့ကိုနှိုင်းယှဉ်။ terminal နှစ်ခုလုံး၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်သည်။ ဘယ်ဟာကိုပိုနှစ်သက်လဲ
Asus က iWatch အစား ZenWatch ၀ ယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြတယ်
Asus ကကျွန်တော်တို့ကိုအရမ်းကိုဂရပ်ဖစ်နည်းဖြင့်ရှင်းပြပြီး Apple iWatch အစား Zenwatch ကို ၀ ယ်ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။
သင်၏ Moto 360 ကို Moto Maker နှင့်မ ၀ ယ်ပါ
Moto Maker သည်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီမှပံ့ပိုးသောကိရိယာအသစ်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုသင်မဝယ်ယူမီ Moto 360 ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
Android Wear သည်အမူအယာထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော Wi-Fi အထောက်အပံ့ကို၎င်း၏အသစ်ပြုပြင်မွမ်းမံချက်တွင်အသုံးပြုလိမ့်မည်
gesture ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော Wi-Fi အထောက်အပံ့အပါအ ၀ င် Android Wear ကို၎င်း၏အသစ်ထပ်မံဖြန့်ချိမည့်သတင်းသစ်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
OJITO !! အက်ပဲလ်ရဲ့ iWatch ကို ၀ ယ်ယူပြီးသားဖြစ်နိုင်ပါတယ်
အင်တာနက်နှင့်အထူးသဖြင့်တရုတ်ဇာစ်မြစ်အွန်လိုင်းစတိုးများသည် Apple ၏ iWatch ကိုတုပ။ ပြည့်နှက်နေသည်
Sony Xperia Z4 တွင်အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြီးမားသောပြproblemsနာများရှိနေသေးသည်
Sony ၏နောက်ဆုံး terminal ဖြစ်သော Xperia Z4 သည်အပူကိုထိန်းညှိနိုင်ခြင်းမရှိသည့်အတွက်ကုမ္ပဏီအားအနည်းငယ်ကြောက်လန့်စေသည်။
Apple Watch နှင့် LG Watch Urbane နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
LG Watch Urbane နှင့်စတုရန်းပုံသဏ္withာန်ပါ ၀ င်နိုင်သောဝတ်ဆင်နိုင်သောပစ္စည်းနှစ်မျိုးနှင့်အခြားမြို့ပတ်ရထားတစ်ခု၌ Apple Watch အသစ်ကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကပ်ထားသည်။
YotaPhone2ကို Android 5.0 Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည်ဖြစ်ပြီးဗားရှင်းအလွတ်တစ်ခုရရှိမည်ဖြစ်သည်
Yota Devices သည် YotaPhone2အတွက်တိုးတက်မှုများကိုကြေငြာခဲ့သည်။ Android 5.0 Lollipop, application အသစ်များနှင့်အဖြူရောင်ဗားရှင်းသို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်။
3'5 of မျက်နှာပြင်ရှိ Alcatel OneTouch Idol5ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပါ
ဤနေရာတွင်ဘာစီလိုနာရှိ MWC3 တွင်တင်ပြသော Alcatel OneTouch Idol5၏ 5'15 "၏ပထမဆုံးအကဲဖြတ်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုသင့်အားဤနေရာတွင်ထားရှိပါသည်။
နှိုင်းယှဉ်ခြင်း Apple Watch VS Moto 360
Apple Watch VS Moto 360 နှင့်ပထမဆုံးနှိုင်းယှဉ်ချက်
Samsung Galaxy S6 ကဘက်ထရီကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့သုံးစွဲသူလက်စွဲထဲမှာရှင်းပြထားပါတယ်
နိယာမအားဖြင့် Samsung Galaxy S6 သည်သုံးစွဲသူများအတွက်လက်လှမ်းမမှီသည့်ဘက်တီးရီးယားမရှိသော်လည်းအသုံးပြုသူလက်စွဲတွင်ရှင်းလင်းချက်များနှင့်အတူ၎င်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Apple Watch: ပန်းသီးနာရီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမတ်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင်ပြသခဲ့သော Apple Watch ၏ Apple Watch ၏သုံးသပ်ချက်။ ဤနာရီ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်နှင့်အင်္ဂါရပ်များကိုရှာဖွေပါ
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Alcatel OneTouch Idol3သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့်အင်္ဂါရပ်များဖြစ်သော Android ၏အလယ်အလတ်တန်းစားအဆင့်တွင်ရှိသည်
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ၄.၇ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိ Alcatel OneTouch Idol3၏ဆန်းစစ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပြီး Moto E ကဲ့သို့တူညီသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်နောက်ဆုံးလွတ်သွားသောကင်မရာများကိုဖော်ပြသည်။
Sony သည်၎င်း၏ Xperia Z810 အတွက် Snapdragon4SoC ၏ပြန့်ပွားမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်စိုးရိမ်သည်
Sony သည် Sony Xperia Z810 တွင် Snapdragon4ပရိုဆက်ဆာဖြန့်ချိရေးပြissuesနာများကိုအလွန်စိုးရိမ်သည်။
Lenovo Tab2 A10-70 သည် ၁၀ လက်မတက်ဘလက်ကိုယူရို ၁၉၉ ဖြင့်သာပြန်လည်စစ်ဆေးပါ
ဤတွင် Lenovo Tab2 A10-70၊ Android Lollipop တက်ဘလက်တစ်ခုလုံးကို Quad Core 64-bit ပရိုဆက်ဆာနှင့်2Gb of Ram ကိုယူရို ၁၉၉ ယူရိုဖြင့်ပထမ ဦး ဆုံးဆန်းစစ်ပြီးနောက်သင်၏ပထမ ဦး ဆုံးထင်မြင်ချက်များကိုဖော်ပြသည်။
Huawei Watch ကြိုတင်မှာယူငွေယူရို ၉၉၉ ဖြင့်စမတ်နာရီသည်မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။
အမေဇုန်ဂျာမနီရှိ Huawei Watch ၏ကြိုတင်မှာယူမှုစျေးနှုန်းသည်များစွာကိုကြောက်လန့်နေသော်လည်းကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကြိုတင်မှာကြားထားရာယူရို ၉၉၉ ထက်လျော့နည်းမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Samsung Galaxy S6 သည်အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းဖြစ်ခဲ့ပါသလား။
Samsung Galaxy S6 သည် MWC ၂၀၁၅ တွင်အကောင်းဆုံးဖုန်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းပြချက်ကိုရှင်းပြသည့်ထင်မြင်ချက်ဆောင်းပါး
Hugo Barra က Xiaomi ၏အွန်လိုင်းစတိုးသည်ဥရောပသို့ရောက်ရှိမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင်သူတို့သည်အပိုပစ္စည်းများနှင့် ၀ တ်စုံများကိုသာရောင်းတော့မည်
အကယ်၍ အက်ပဲလ်သည်ဇိမ်ခံစမတ်နာရီကဏ္ trying သို့ ၀ င်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အလွန်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါက Huawei ကဲ့သို့သောအခြားကုန်ပစ္စည်းများသည် ကျွန်တော်ပူဖောင်းအသစ်တစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလား။
၉၉ ယူရိုအတွက် Lenovo Tab2 A8 ကို Android Lollipop Phablet မှာပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ
Lenovo Tab2 A8၊ Android Lollipop ပါသည့် Phablet တစ်ခုလုံး၊ Mediatek quad-core ပရိုဆက်ဆာနှင့် HD resolution ဖြင့် ၉၉ ယူရိုသာရှိသည့် ၈ လက်မ IPS မျက်နှာပြင်ကိုဗီဒီယိုဖြင့်ပြသပါမည်။
# MWC2 မှ Asus ZenFone 15 သုံးသပ်ချက်
ဤ Asus ZenFone2Analysis နှင့် Android terminal အသစ်၏ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များအားဖြင့်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့စွန့်ခွာပါမည်။
ရိုင်းစိုင်းတဲ့ HTC One M9 Plus တစ်ခုပေါ်လာတယ်။
HTC One M9 Plus ၏ပုံရိပ်အသစ်များကိုစစ်ထုတ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ 2K screen နှင့် fingerprint sensor အတွက်ထင်ရှားလိမ့်မည်။
Sony Smartwatch 15 ၏ # MWC3 မှသုံးသပ်ချက်။ ဤရွေ့ကားငါ၏အရိုးသားပုဂ္ဂိုလ်ရေးထင်မြင်ချက်များဖြစ်ကြသည်
ဤတွင်သင့်တွင် Sony Smartwatch 15 ၏ MWC3 မှပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်ယခုအချိန်တွင်အနည်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုရှိသော Android Wear စမတ်နာရီဖြစ်သည်။
Honor 4X နှင့် Honor6Plus တို့ကိုဥရောပသို့တရားဝင်ရောက်ရှိလာခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်
တရားဝင် Honor 4X နှင့် Honor6Plus နှစ်မျိုးလုံးသည်စပိန်သို့တရားဝင်ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်ဟု Honor မှကြေငြာခဲ့သည်။
Samsung CEO S6 ကဘာလို့ Qualcomm SoC မသုံးတာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါတယ်
Samsung ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် SK Shin မှထုတ်လုပ်သူများသည် Qualcomm ၏ဖြေရှင်းချက်များကိုအသုံးပြုမည့်အစား၎င်း၏ SoCs များကိုလောင်းကစားရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြခဲ့သည်
Moto E နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မည့် Huawei စမတ်ဖုန်း Honor Holly
သငျသညျကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ android terminal ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်€ 130 ထက်နည်းသောစမတ်ဖုန်း Honor Holly ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းစစ်မှုကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။
Siswoo သည် MWC 2015 တွင်တင်ဆက်ခဲ့သောစပိန်အမှတ်တံဆိပ် Android စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်
Siswoo သည် Mobile World Congress တွင်တင်ဆက်ခဲ့သောစပိန်အမှတ်တံဆိပ် Android စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်
Huawei သည်နောက်ထပ် Nexus ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်
Nexus မျိုးဆက်သစ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကောလဟာလများကိုကြာမြင့်စွာကြားခဲ့ရသည်။ ယခု GizmoChina ဝက်ဘ်ဆိုက်မှထုတ်ပြန်သည့်အတိုင်း Huawei သည် Nexus အသစ်တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်မည်။
Samsung Galaxy S6, ၎င်း၏အစွမ်းထက်သောကင်မရာ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံး
စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော Samsung Galaxy S6 ၏အစွမ်းထက်သောကင်မရာ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များကိုသင်တို့အားကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
Acer Liquid Z520 သည် ၅ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့်ထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူ၏အခြားလောင်းကစားဖြစ်သည်
520ပြီလအတွက် Acer Liquid Z4.4 အသစ်ကို Android XNUMX KitKat နှင့် DTS အသံဖြင့်ပါလာမည်။
Lenovo Tab2 A7 / 30aLenovo Phablet ကို MWC15 တွင် ၇၉ ယူရိုဖြင့်ရောင်းချသည်
စပိန်နိုင်ငံတွင် ၇၉ ယူရိုသာရောင်းချနိုင်မည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော Lenovo Phablet ဖြစ်သော Lenovo Tab2015 A2 /7မှ MWC 30 မှသင့်အားပြသပါမည်။
ZTE Blade Star 2, အသံထိန်းချုပ်မှုရှိသောစမတ်ဖုန်း
ZTE Blade Star2ကိုသူ့ရဲ့ voice command system အတွက်သီးခြားစီစမ်းသပ်ပြီးပါပြီ။ ယခုအချိန်တွင်၎င်းသည်အင်္ဂလိပ်နှင့်တရုတ်ဘာသာဖြင့်သာရရှိနိုင်သည်။
Alcatel One Touch Watch၊ Android Wear မပါ ၀ င်သော Wareable ၁၂၉ ယူရို
Android Wear မပါဘဲနာရီ ၁၂၉ ယူရိုဖြစ်သော Alcatel One Touch Watch ဖြင့်စမတ်နာရီများနှင့် ပတ်သက်၍ Alcatel ၏အန္တရာယ်ရှိသည့်အလောင်းအစားကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။
Huawei နာရီသည် Android Wear နှင့်အသွင်အပြင်ရှိသည့်ကြော့ရှင်းသည့်စမတ်နာရီတစ်ခုဖြစ်သည်
Huawei Watch သည် Android Wear အောက်တွင် ၀ တ်ဆင်နိုင်သည့်အရာဖြစ်ပြီးတရုတ်ထုတ်လုပ်သူများ Mobil World Congress တွင်တင်ပြခဲ့သည်
Android 220 Lollipop ပါ ၀ င်သည့်နိမ့်ကျသည့်စမတ်ဖုန်း Acer Liquid Z5.0
ယူရို ၈၉ အတွက် Acer Liquid Z89 ဖုန်းကိုပထမဆုံး ၄.၅ လက်မအရွယ် Android 220 Lollipop ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ZTE Blade S6 Plus သည်အာရှထုတ်လုပ်သူ၏ Phablet အသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်
ZTE Blade S2015 Plus ကို MWC6တွင်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၊ ယူရို ၃၅၀ ထက်မပိုသောအလယ်အလတ်တန်းစား Phablet ။ Internal Memory 350GB နဲ့လုံလောက်ပါသလား။
Lenovo S60, 2015 Moto E သူ့ဟာသူထက်ပိုမိုမြင့်မားအရည်အသွေးအခြားရွေးချယ်စရာ
ဤတွင်သင့်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ချက် Lenovo S60 - Moto E 2015 အသစ်ကဲ့သို့စျေးနှုန်းချိုသာသော terminal တစ်ခုဖြစ်သည့်၎င်း၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကင်မရာများကဲ့သို့ပိုမိုကောင်းမွန်သောလက္ခဏာများရှိသော်လည်းသင့်အားထားရှိပါသည်။
Kyocera Torque၊ ဤဂျပန်ထုတ်လုပ်သူမှပထမဆုံးသော Ultra-resistance စမတ်ဖုန်းသည်ဥရောပ၌စတင်မိတ်ဆက်သည်
Kyocera သည်ဥရောပဈေးကွက်သို့စစ်ဘက်၏ 810G လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအလွန်အစွမ်းထက်သော Torque ဖြင့်ရောက်ရှိသည်
Samsung Galaxy S6 ၏အသစ်ဖြစ်သောအသစ်ဖြစ်သော Touchwiz ကိုဗီဒီယိုဖြင့်စမ်းသပ်သည်
Samsung Galaxy S6 ၏အသစ်ပြန်လည်ဖြစ်သော Touchwiz interface အသစ်၏ဗားရှင်းသည်မည်သို့တုံ့ပြန်သည်ကိုဗွီဒီယိုတွင်ပြသခဲ့သည်။
MyWigo V8 သည်စပိန်စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပြီးယောက်ျားလေးများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်လာသည်
MyWiGo V8 သည်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Android ကိရိယာဖြစ်ပြီး€ 349 အတွက် Valencian ကုမ္ပဏီမှထုတ်လုပ်သည်။ အားလုံးအလွန်ကြီးစွာသောထုတ်ကုန်
MWC ၂၀၁၅ - OS တွင် LG LG ကိုဗီဒီယိုဖြင့်ပြသသည်
LG LG မှဗီဒီယိုဖြင့် LG Spirit ကိုဘာစီလိုနာရှိ MWC 2015 တွင်ပြသပါမည်။
Honor 6၊ အစွမ်းထက်သော Huawei စမတ်ဖုန်း၏ပထမဆုံးထင်မြင်ချက်များ
Huawei ၏ဥရောပပြိုင်ပွဲဝင်အသစ်ဖြစ်သော Honor6ကိုဆန်းစစ်ကြည့်သည်မှာအထင်ကြီးစရာကောင်းသောစျေးနှုန်းများဖြင့်ထူးခြားသောလက္ခဏာများဖြစ်သည်
[Video] Telefónicaသည်ကလေးများအတွက် Smartwatch ဖြစ်သော MWC15 Filip တွင်တင်ဆက်ထားပြီး၎င်းတို့ကိုအမြဲတမ်းတည်ရှိသည်
ယနေ့တွင်ဘာစီလိုနာရှိ MWC15 မှကလေးငယ်များအတွက် Smartwatch Filip ကိုမကြာမီတွင်Telefónicaသည် စတင်၍ အသေးငယ်ဆုံးအိမ်ကိုတည်ဆောက်မည်ဖြစ်သည်။
Snapdragon9SoC ဖြင့် HTC One M810 သည် MWC တွင်အပူလွန်ကဲသည်
၂၀၁၅ MWC တွင် Snapdragon9SoC ပါသော HTC One M810 သည်အပူလွန်ကဲမှုဒဏ်ကိုခံစားခဲ့ရသည်။ Snapdragon 2015 နှင့်ပြနာများရှိပါသလား။
NVIDIA Shield, Tegra X1 နှင့် Android TV 4K တို့ကိုဒေါ်လာ ၁၉၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်
NVIDIA Shield သည် Tegra X1 ချစ်ပ်နှင့် Android TV ဖြင့်မာလ်တီမီဒီယာစွမ်းရည်များမှရရှိနိုင်သောအလားအလာအားလုံးနှင့်အတူရောက်ရှိသည်
Hisense King Kong, 4G ပါ ၀ င်သည့်အလွန်အစွမ်းထက်သောစမတ်ဖုန်း
Hisense King Kong ဖုန်းသည်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လှုပ်ခြင်းနှင့်ပြိုလဲခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းအတွက်အထူးအာရုံစိုက်စေသည်
ZTE Blade S6 သည်ယူရို ၂၀၀ အတွက်အလွန်ကောင်းသော terminal ဖြစ်သည်
ZTE Blade S6၊ Qualcomm Snapdragon 615 ပရိုဆက်ဆာနှင့် ၁၃ မီဂါပစ်ဇယ်လ်ကင်မရာပါသည့် terminal ကိုယူရို ၂၀၀ ဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။
Honor6plus၊ အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းနှင့်စျေးကွက်ရှိအကောင်းဆုံးကင်မရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei ၏ဥရောပဈေးကွက်အတွက် Honor လိုင်း၏လက်ရှိအထင်ကရဖြစ်သော Honor6Plus အားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး၎င်းသည်၎င်း၏အစွမ်းထက်သည့်နှစ်ဆကင်မရာအတွက်ထင်ရှားသည်
ZTE Spro 2၊ ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံး mini android projector ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်
MWC ၂၀၁၅ တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောအာရှထုတ်လုပ်သူ၏ Android projector ZTE Spro2ကိုသင်ဆန်းစစ်လေ့လာပါမည်။
LG Watch Urban ကို Android Wear မပါဘဲလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးနာရီ
Android Wear မှထွက်လာပြီး WebOS နှင့်ထွက်ပြေးနေသော LG Watch Urban အသစ်ဖြစ်သော LG စမတ်နာရီသစ်ကိုဗီဒီယိုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြသသည်။
Samsung Gear VR ဆန်းသစ်တီထွင်မှုထုတ်ဝေမှု၊
Samsung Gear VR Innovator Edition ကိုလေ့လာခြင်း၊ Samsung Galaxy S6 / S6 Edge နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့အား virtual reality သို့အပြည့်အဝထည့်သွင်းနိုင်သည့် gadget တစ်ခု
Android3Sony ၏တရားဝင် Lollipop နှင့် Z5.0.2 မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုဗီဒီယိုတွင်ပြသသည်
Xperia Z5.0.2 အတွက် Android3Lollipop ကိုတရားဝင်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုဗွီဒီယိုတွင်ပြသခဲ့သည်။
MWC ၂၀၁၅: Lenovo Vibe Lenovo စမတ်ဖုန်းကင်မရာကိုရိုက်သည်
MWC15 မှသင့်အား Android 5.0.2 Lollipop လည်ပတ်မှုစနစ်ပါသောစမတ်ဖုန်းကို Lenovo Vibe Shot (သို့မဟုတ်အတူတူပင်ဖြစ်သည်) ကိုဗီဒီယိုဖြင့်သင်ပြပါမည်။
Sony Xperia Z3 သည် Android 5.0.2 Lollipop နှင့် MWC တွင်တွေ့ရသည်
Xperia Z အကွာအဝေးတစ်ခုလုံးမှာမတ်လအတွက် Android 5.0.2 Lollipop ပါရှိမည်ဖြစ်ပြီး Xperia Z3 ဗီဒီယို၏နိဒါန်းအနေနှင့်ဖြစ်သည်။
MWC ၂၀၁၅ - LG Magna ဗီဒီယိုတွင်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Android Mid-range
ဘာစီလိုနာတွင် MWC ၂၀၁၅ မှစ၍ LG Magna ကို Android အလယ်အလတ်တန်းစားဗီဒီယိုဖြင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
MWC ၂၀၁၅ - Sony Xperia M2015 Aqua,4bit Octa core ဖြစ်သော Sony မှယူရို ၃၀၀ အောက်
MWC 2015 ကိုဘာစီလိုနာတွင်ကျင်းပခဲ့ပြီး Sony Xperia M4 Aqua၊ Sony Octa Core တစ်ခုလုံးကိုယူရို ၃၀၀ အောက်ဖြင့်ဗီဒီယိုဖြင့်ပြသသည်။
MWC ၂၀၁၅ - Sony Xperia E 2015G၊ Sony ၏နိမ့်ဆုံး terminal ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်
MWC ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ ပလတ်စတစ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော Sony Xperia E 2015G နိမ့်နိူင်သည့် Sony terminal ကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပြိုကွဲသွားပုံရသည်။
MWC ၂၀၁၅ - ကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei ၏ TalkBand B2015 ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Huawei ၏ MWC 2015 တွင်ရပ်တည်နေဆဲဖြစ်ပြီး၊ ယခုအချိန်တွင်လှပသောဒီဇိုင်းဖြင့် Huawei ၏ TalkBand B2 အသစ်ဖြစ်သောခေတ်မီ Wareable သို့မဟုတ်တွက်ချက်သည့်လက်ကောက်ကိုစမ်းသပ်သည်။
MWC ၂၀၁၅ - Huawei ၏အစွမ်းထက်သော Octa Core ဖြစ်သော Huawei MediaPad X2015 ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်
ဘာစီလိုနာရှိ MWC ၂၀၁၅ တွင် Huawei ရပ်တည်မှုမှအစွမ်းထက်သော Octa Core တက်ဘလက်ဖြစ်သော Huawei MediaPad X2015 ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
MWC ၂၀၁၅: LG Leon သည်ဘာစီလိုနာတွင်တင်ပြခဲ့သည်
ဘာစီလိုနာရှိ MWC ၂၀၁၅ မှနေ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် LG Leon အသစ်ကိုဗီဒီယိုဖြင့်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ အနိမ့်ဆုံး Android အတွက်ရည်ရွယ်သည့် terminal တစ်ခုဖြစ်ပြီး Motorola Moto E 2015 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နိမ့်နိမ့် Android အကွာအဝေးတွင်တိုက်ခိုက်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
Blackphone2စမတ်ဖုန်းအသစ်နှင့် Blackphone + တက်ဘလက်အသစ်တို့သည် MWC သို့ရောက်ရှိလာသည်
Blackphone သည်မော်ဒယ်သစ်နှစ်မျိုးပါ ၀ င်သည်။ Blackphone + ပါသည့်တက်ဘလက်နှင့် Blackphone2ပါသည့်စမတ်ဖုန်း
MWC ၂၀၁၅ - LG ၏ကွေးသော terminal LG G Flex 2015 ကိုဗီဒီယိုကြည့်သည်
ဘာစီလိုနာရှိ MWC ၂၀၁၅ မှ LG G Flex 2015 ကိုကြည့်ပြီးဗီဒီယိုကြည့်သည်။ ၎င်းသည် MWC ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးဆိပ်ကမ်းများနှင့် LA Vegas ရှိအတိတ် CES ၏ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သည်။
MWC ၂၀၁၅ - Samsung Galaxy S2015 ကင်မရာ၏အံ့မခန်းဖွယ်အရည်အသွေးနှစ်ခု
ဒီဗီဒီယိုမှာ MWC 2015 မှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်း Samsung Galaxy S6 ကင်မရာအသစ်ရဲ့ထူးခြားချက်နှစ်ခုကိုငါတို့တွေ့နိုင်တယ်။ သံသယမရှိဘဲ၎င်း၏အားသာချက်တစ်ခု။
MWC 2015: ဗွီဒီယိုတွင် Samsung Galaxy S6 နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း
ဘာစီလိုနာရှိ MWC ၂၀၁၅ မှနေ၍ သင် Samsung Galaxy S2015 ကိုဗီဒီယိုဖြင့်ပြသသည်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံစုံ၏နောက်ဆုံးပေါ်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy S6 Edge၊ ကွေးကောက်မျက်နှာပြင်ပါသည့်ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းကိုဗီဒီယိုဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်
ဒီနေ့မှာတော့ Samsung Galaxy S6 Edge ကိုနှစ်ခြိုက်စွာကွေးညွှတ်ထားတဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာပထမဆုံးအနေဖြင့်ဗွီဒီယိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတစ်ခုယူလာပါပြီ။ အဲဒါအတွက်ပိုပေးရကျိုးနပ်လား။
Sony Xperia M4 Aqua သည် 64-bit Snapdragon 615 chip နှင့် 13MP ကင်မရာတို့ဖြင့်ကြေညာခဲ့သည်
Sony Xperia M4 Aqua ကို Mobile World Congress တွင်ဂျပန်ကုမ္ပဏီမှတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်
Sony Xperia Z4 Tablet သည် ၁၀.၁ လက်မအရွယ် 10.1K မျက်နှာပြင်နှင့် Snapdragon2ချစ်ပ်တို့ကိုတရားဝင်ထုတ်လုပ်သည်
Sony သည် Mobile World Congress တွင်4"screen နှင့် Snapdragon ချစ်ပ်ပါသည့် Xperia Z10.1 တက်ဘလက်အသစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်
HTC One M9 ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
HTC One M9 ၏တရားဝင်တင်ဆက်မှုသည် MWC တွင် S6 နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မည့်ထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်သူ၏အထင်ကရအသစ်ဖြစ်သည်
Samsung Galaxy S6 Edge ကပထမ ဦး ဆုံးစမတ်ဖုန်းကိုကွေးကောက်မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်
Samsung Galaxy S6 Edge ၏မျက်နှာပြင်သည်နှစ်ဆကွေးကောက်မျက်နှာပြင်ပါသည့်ပထမဆုံးသောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy S6 ကထုတ်လုပ်သူရဲ့အဓိကစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်ကိုပြသခဲ့သည်
Samsung Galaxy S6 ၏တင်ဆက်မှုသည်နောက်ဆုံးတွင်ရောက်ရှိလာသည်။ Samsung သည် MWC 2015 တွင်အနိုင်ရသူဖြစ်ပါသလား။
[APK] Samsung Galaxy S6 ၏အသုံးချပရိုဂရမ်များအားလုံးကိုအခြားသူတစ် ဦး ဦး အားစစ်ဆေးကြည့်ပါ
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့လက်စွဲစာအုပ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထည့်သွင်းခြင်းအတွက် Samsung Galaxy S6 ၏အက်ပလီကေးရှင်းကို APK ပုံစံဖြင့်ထားရှိပါသည်။
Motorola Moto E 2015 ကို ၀ ယ်ယူရန်အမေဇုန်စပိန်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်နိုင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၌အွန်လိုင်းအရောင်းရဆုံး Motorola terminal အသစ်ရှိပြီးသားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Moto E 2015 ကိုသင် ၀ ယ်လိုလျှင်ဤနေရာနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မည်သို့မည်ပုံဝယ်မည်
[ဗွီဒီယို] Moto E 2015 အားဆန်းစစ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Motorola ငယ်လေးကိုစေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်ခဲ့သည်
ဤနေရာ၌ Moto E 2015 ကိုဆန်းစစ်လေ့လာထားပါသည်။ Terminal သည်အလယ်အလတ်တန်းစားနှင့်ယူရို ၁၂၉ သာရှိသော terminal များအတွက် infarction ၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီနိုင်သည်။
[ဗွီဒီယို] သင် Moto 360 နှင့် ပတ်သက်၍ မသိသောလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု
အကယ်၍ သင်သည် Motorola ထုတ်လုပ်သူမှစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ယနေ့အထိသင် Moto 360 ၏ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုသင်မသိပါ။
Samsung Galaxy S6 ၏တင်ဆက်မှုအဖြစ်အပျက်« Galaxy Unpacked 2015 »ကိုကြည့်ရှုရန်
ဒီနေရာတွင်လာမည့်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ကျင်းပမည့် Galaxy S2015 ၏တင်ဆက်မှုဖြစ်သည့်လာမည့်တနင်္ဂနွေနေ့တွင် Galaxy Unpacked6ကိုတက်ရောက်ရန်ရှေ့တန်းတွင်ထိုင်ခုံများကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားပြီဖြစ်သည်။
Motorola Moto E 4G တင်ဆက်မှုအသစ်၊ သင်ရွေးချယ်သည့်နေရာတိုင်းတွင် Unpacked Moto E 4G!
Androidsis မှသင့်အားဤအထူးပွဲတော်ကိုသင်လိုချင်သည့်နေရာတိုင်းတွင်တိုင်း၊ Unpacked Moto E 4G သို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
Logitech X300 သည်အလွန်အားကောင်းသော Bluetooth Speaker
Samsung Galaxy S6 အတွက် TouchWiz ကတကယ့်ကိုအလင်းပေါ့
Samsung Galaxy S6 နှင့် Galaxy S6 Edge တို့အတွက် TouchWiz သည်ပေါ့ပါးပြီးမြန်ဆန်သည့်အလွှာဖြစ်လိမ့်မည်။
Motorola Moto E 4G အသစ်ကိုယခုတရားဝင်ကြေငြာလိုက်သည်။ သင့်အား၎င်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်၎င်း၏တရားဝင်ဈေးနှုန်းအားလုံးကိုပြောပြပါမယ်
Motorola Moto E 4G အသစ်၏တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့သိပြီးဖြစ်သည်။
[ဗွီဒီယို] Analysis Woxter Zielo 400 သည် Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုရရှိမည့် Woxter ၏ Quad Core
ဤတွင်သင့်အား Woxter Zielo 400 ၏အလယ်အလတ်တန်းစား Android terminal နှင့် Android 5.0 Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းကိုအပြည့်အဝဆန်းစစ်လေ့လာထားပါသည်။ အားလုံးသည်သင်၏အိမ်တွင်ယူရိုငွေ ၁၄၀ အောက်သာရှိသည်။
HTC One (M7) သည် Android 5.0 Lollipop ကိုလက်ခံရရှိသည်
ဥရောပ HTC One M7 သည်အလေးချိန် ၈၀၅ MB နှင့် Material Design ၏နှစ်ဆသော Android 5.0 L ကိုလက်ခံရရှိပြီးဖြစ်သည်
[ဗွီဒီယို] ကျွန်ုပ်တို့သည် Atongm W008 ဟုခေါ်သောစမတ်နာရီကိုယူရို ၇၀ အောက်သာစမ်းသပ်ခဲ့သည်
ဒီနေ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော Atongm W008 စမတ်နာရီ၏ဗီဒီယိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ယူဆောင်လာသည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အလိုအလျောက်လည်ပတ်နိုင်သည့်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့စမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့်နာရီဖြစ်သည်။
BQ သည် Aquaris M5.5, M5 နှင့် M4.5 စမတ်ဖုန်းအသစ်သုံးမျိုးကိုတင်ပြခဲ့သည်
BQ သည် Aquaris မိသားစုတိုးချဲ့သည့် Aquaris M5.5, Aquaris M5 နှင့် Aquaris M4.5 ဖုန်းသုံးမျိုးကိုယနေ့ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
Meizu MX5 ၏ပထမကောလဟာလများမှာ ၄၁ megapixels ရှိသောကင်မရာတစ်လုံးကိုဖော်ပြနေသည်
Meizu MX5 နှင့်ပတ်သက်သည့်ပထမဆုံးကောလာဟလများရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ၅.၅ လက်မအရွယ် 5.5L screen နှင့် 2-megapixel မှန်ဘီလူးရှိသည့် terminal တစ်ခု
T-Mobile မှ Samsung Galaxy S6 ၏အကောင်းဆုံးပုံရိပ်ထွက်လာသည်
Samsung Galaxy S6 အသစ်၏ယနေ့အထိအကောင်းဆုံးပုံရိပ်ကိုအော်ပရေတာ T-Mobile မှရရှိသည်
LG မှ ၄ င်း၏ Android ဖုန်းသစ် ၄ ခုကို mid-range အတွက်ပြသသည်
LG မှ Joy, LG Leon, LG Spirit နှင့် LG Magna စမတ်ဖုန်းသစ်လေးမျိုးတင်ဆက်ပြသခြင်းဖြင့် LG သည်ယခုအပတ်အတွင်းထိပ်ဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
LG G Watch R သည်ဤအရာများဖြစ်သည်
LG G Watch R, ကိုရီးယားထုတ်လုပ်သူ၏စမတ်နာရီနှင့်လည်ပတ်စက်တစ်လုံးပါ ၀ င်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်ပြီးမြောက်မှုများကိုဆန်းစစ်လေ့လာပါသည်။
၎င်းသည် HTC One M9 ဖြစ်လိမ့်မည်၊ ပုံများ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စျေးနှုန်းကိုစစ်ထုတ်သည်
HTC One M9 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားလုံးသည်ပုံရိပ်များ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စျေးနှုန်းကိုပင်ပေါက်ကြားစေခဲ့သည်။
Lenovo Vibe Shot သည်ဓာတ်ပုံချစ်သူများအတွက်စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည်
Lenovo Vibe Shot ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအရည်အသွေးများအပြင်အာရှထုတ်လုပ်သူ၏စမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
Samsung Galaxy S6 ကိုကြေငြာလိုက်သည်
Samsung Galaxy S6 ၏ကြေငြာချက်အသစ်ကိုထုတ်ဖော်ကြေငြာခဲ့ပြီး၎င်းတွင်လာမည့်ကိုရီးယား flagship အသေးစိတ်ကိုပြသထားသည်
Samsung Galaxy S6 ၏ဘက်ထရီမှာ ၂၆၀၀ mAh ဖြစ်သည်
Samsung Galaxy S6 ၏ဘက်ထရီအချက်အလက်အားလုံးကိုစစ်ထုတ်ထားပြီး ၂၆၀၀ mAh စွမ်းရည်ရှိသည်။
၅.၂ လက်မအရွယ် Sony Xperia စမတ်ဖုန်းကို Android 5.2 ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောစံသတ်မှတ်ချက်များတွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်
Sony သည် Xperia Z2015 အသစ်ကိုနွေရာသီတွင်မချန်မထားဘဲ MWC4ကိုမည်သည့် terminal မဆိုပြသလိမ့်မည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့မှာ Xperia အကြောင်းနောက်ထပ်အချက်အလက်တွေရှိနေပြီ
ယခု Moto 360 ကို Google Play စတိုးတွင်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ
Moto 360 ကို Play Store ၌ ၂၄၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်စရိတ် ၉.၉၉ ဖြင့်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီ
စွမ်းအင်နားကြပ် BT9 ကိုစွမ်းအင်စနစ်မှအသစ်နှင့်စွမ်းအားကောင်းသောနားကြပ်များကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းအင်နားကြပ် BT9 စတင်မိတ်ဆက်မှုကိုသင့်အားအကြောင်းကြားခဲ့သည်။ ငါတို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ၊
Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည့် Lenovo terminal ၏တရားဝင်စာရင်း
ဒီနေရာမှာ Android Lollipop ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မယ့် Lenovo ၏တရားဝင်စာရင်းကိုချန်ထားလိုက်ပါတယ်။
[Video] LG G2: Android တရားဝင် Lollipop မှတရားဝင် Kit Kat Rom သို့ Flash Tools များမလိုအပ်ဘဲမည်သို့ပြန်သွားရမည်နည်း
Android Lollipop မှ LG G2 D802 သို့တရားဝင် Android Kit Kat သို့ Flash Tools မလိုအပ်ဘဲ Recovery (သို့) Root မဆုံးရှုံးစေဘဲပြန်လည်ရယူနည်း။
[Video] Xiaomi RedMi Note 11G တွင် X4 ကို Xancin မှထည့်သွင်းပြီး CMXNUMX ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
dualSIM mobile forum မှ Xancin ကို Xiaomi RedMi Note 11G တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
LG Watch Urbane သည် Android Wear သုံးသောစမတ်နာရီတစ်လုံးဖြစ်သည်
LG Watch Urbane သည်ဝတ်ဆင်နိုင်သောလည်ပတ်စက်တစ်လုံးဖြစ်ပြီး Android Wear ကို အသုံးပြု၍ လည်ပတ်နိုင်သည့်စနစ်ရှိပြီး MWC 2015 တွင်ပြသမည်။
HTC One M9 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများအားလုံးသည်လာမည့် HTC flagship နှင့်တွဲဖက်မည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအပြင်ပေါက်ကြားသွားပြီဖြစ်သည်
ပြီးတော့ Samsung ကသူ့ရဲ့တွစ်တာအကောင့်မှာစာတိုလေးတင်လိုက်တာပါပဲ။ သူက Samsung Galaxy S6 ကိုပေါင်းစပ်ပေးမယ့်မှန်ဘီလူးအသစ်ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုချီးမွမ်းတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့သည့် optical image တည်ငြိမ်မှုရှိသည့် 20 megapixel module တစ်ခုလား။
Samsung Galaxy Grand3ကိုမကြာမီတရားဝင်ကြေညာတော့မည်
Galaxy Grand3အသစ်သည်ယခင် Samsung Grand 2014 တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အစောပိုင်းကရရှိခဲ့သောအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုလိုက်ရန်မျှော်လင့်နေသည်
Huawei သည် MediaPad X2 တက်ဘလက်ကို MWC တွင်တင်ပြလိမ့်မည်
Mobile World Congress သည် MediaPad X2 တက်ဘလက်အသစ်ကိုတင်ဆက်မည့် Huawei ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများစွာအတွက်မလွှဲမရှောင်သာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Sony Xperia E4 သည်ဂျပန်ထုတ်ကုန်များ၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်ကိုတင်ဆက်ခဲ့သည်
မကြာသေးမီရက်သတ္တပတ်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည် Sony Xperia E4 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတွေ့မြင်ရပြီးဂျပန်ထုတ်လုပ်သူများ၏အလယ်အလတ်တန်းစားအသစ်ဖြစ်သည်။ Sony သည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်အသစ်ကို MWC တွင်တင်ဆက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်သူတို့အနေဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Doogee DG700 Titans2ကို IP67 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်အတူယူရို ၁၂၀ အောက်သာစစ်ဆေးခဲ့သည်
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည် IP700 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိထားသော Doogee DG2 Titans 67 သတ္တုနှင့်သားရေဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးအလွန်အားကစားသို့မဟုတ်အလုပ်ကိုနှစ်သက်သူများအတွက်ရည်ညွှန်းထားသော Doogee DGXNUMX Titans XNUMX ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။
Samsung Galaxy S6 ၏ပြန်ဆိုချက်များ
Samsung Galaxy S6 အသစ်၏ဒီဇိုင်းတွင် ၂ ပတ်ကျော်အတွင်းရောက်ရှိလာမည့်အရာကိုအနည်းငယ်ပြန်ဆိုမှုများ
[ဗွီဒီယို] LG G2 ကို LG ၏တရားဝင် Android Lollipop သို့မွမ်းမံရန်
LG G2 ကို LG ၏တရားဝင် Android Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော Recovery နှင့် Root ခွင့်ပြုချက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်ကိုရီးယားမော်ဒယ် Rom ကို အသုံးပြု၍ LG GXNUMX ကိုမည်သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရမည်ကိုဤတွင်တင်ပြသည်။